အပြောမတတ်တော့ အားနာစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပြောမတတ်တော့ အားနာစရာ
Posted by etone on Jan 26, 2012 in My Dear Diary | 26 comments
ဒီနေ့မနက်ရာသီဥတုလေးက ပိုချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်တာကြောင့် အနွေးထည်ဝတ်လျှင်စိတ်မရှည်လို့ ကြယ်သီးမတတ်တဲ့ ကျွန်မ .. .အဆုတ်အအေးပတ်မှာစိုးလို့ …. ခုံမှာ ထိုင်လျှက်နဲ့ပင် ကြယ်သီးတပ်နေမိပါတယ် … ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ တိုးညှင်းစွာ ထွက်ပေါ်လာသော ဖုန်းသံကြောင့် …. ဖုန်းကိုင်မိခဲ့တယ် … ။ တစ်ခါမှ မသိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်မို့ .. စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ် … ။( လူချစ်လူခင်ကလည်းများတော့ .. ဖုန်းဆက်ပြီး ဆဲမယ့်လူတွေလည်း တပုံကြီးလေ .. ) အလှူရှင်လား ၊ ဖုန်းမှားတာများလားလို့ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ဖုန်းကိုင်ခဲ့တယ် …။ တစ်ဘက်က ဖုန်းခေါ်သူဧ။် ပြောကြားချက်အရ အလှူရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး … လာရောက်လှူဒါန်းပါမယ်လို့ ဆက်သွယ်လာတာကြောင့် လိပ်စာပေးပြီး ကျွန်မတို့ စက်ရုံကိုလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်လိုက်ပါတယ် … ။ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်လာလှူဒါန်းမယ်ဆိုတာကြောင့်…. ကျွန်မ အလုပ်လုပ်ရင်းပဲ စောင့်နေခဲ့ပါတယ် … ။
နေ့လည်ပိုင်းတွင်တော့ .. အလှူရှင်က တစ်ခါ ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး စက်ရုံရှေ့ရောက်ပြီဆိုတာကြောင့် … ဆင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ် … ။ အပြင်ကလာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ရုံးပေါ်ခေါ်ပြီး ရေအေးအေးလေးတစ်ခွက်လောက်တော့ တိုက်လိုက်ချင်ပေမယ့် ….. ကျွန်မတို့ ရုံးက သုံးလွှာမှာပါ … မနက်တစ်ခါ တက်ရတာတောင် ညီးငွေ့နေတာ .. အလှူရှင်ကို ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်မှာ စိုးလို့ … အောက်ဆင်းပြီးပဲ စက်ရုံဝန်းရှေ့မှာ တွေ့ခဲ့ပါတယ် … ။ စက်ရုံရှေ့က သစ်ပင်အောက်မှာ ကားတစ်စီးပဲတွေ့ပြီး … ဖြူဖြူခန့်ခန့်…. အသက်လေးဆယ်ခန့် အမျိုးသားတစ်ယောက် ကတော့.. ကားနားမှာရပ်လို့ပေ့ါ …. ။ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတော့..ဘလိုင်းကြီးသွားလည်း မခေါ်ရဲတာကြောင့် … ဖုန်းပြန်ဆက်လို့ .. သူ့ဆီက ဖုန်းသံမြည်မှ .. ဟီးဟီး ဆိုပြီး သွားဖြဲပြရဲတာပါ …… ။ အလှူရှင်က ရွာထဲက စာရေးသူတစ်ဦးပါပဲ .. လတ်တလောတော့ .. ပျောက်ချက်သားကောင်းပြီး … စာပဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ် … ၀င်မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် … ။ အဲ့ဒီကလောင်ရှင်ကို ကျွန်မစိတ်ထဲ လူငယ်လေးပဲ ထင်လို့ … အားရ၀မ်းသာစွာနဲ့ … စကားတစ်ခွန်းပြောမိသွားတယ် … ။ တွေ့တွေ့ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပါပဲ … ကျွန်မပြောလိုက်တဲ့စကားက သဘောရိုးနဲ့ ပြောလိုက်ပေမယ့် …. အရမ်းကို အားနာစရာကောင်းသွားပါတယ် … ။ ကျွန်မပြောလိုက်တာက … လူငယ်လေးမှတ်တာ.. ဒီလောက်အသက်ကြီမယ်မှန်း မထင်ထားဘူးလို့ပါပဲ … ။ ပြောပြီးမှ စကားမှားသွားမှန်း သိပေမယ့် … ဖြေရှင်းချက်တွေ ထပ်ပေးလျှင် နားလည်မှုတွေလွဲကုန်မှာစိုးလို့ .. တခြားစကားကိုပဲ ..ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …. ။ ကျွန်မဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ … ပြောလိုက်တာနဲ့ .. တပ်တပ်စင်အောင် လွဲသွားတာကြောင့် .. အလှူရှင်ကို ဒီနေရာကနေပဲ .. အားနာစွာနဲ့ … တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် … ။ လူငယ်စာရေးသူလို့ ထင်ထားပြီး …. တကယ်အပြင်မှာတွေ့လိုက်တော့ … တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အသက်ရွယ်မို့ … အားရ၀မ်းသာနဲ့ ပြောထွက်သွားတာ ..ကို့ရို့ကားယားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ် … ။
အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပါပဲ … စကားဆိုတာမျိုးက ပြောဆိုသူရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဖက်သား စိတ်ထဲကြားနာဝင်ရောက်သွားတဲ့ အခြေနေကွာတာမို့ …. စိတ်ထက်ပါးစပ်ပိုမြန်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်ပြီး …. နောက်ပိုင်းစကားပြောဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဖြစ်မိပါတယ် … ။ စကားအပြောဆို အမှူကျင့်တွေကလည်း ခေတ်ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာခဲ့တယ် … တစ်ခါတစ်လေ လူကြီးတွေ ကြားထဲမှာအချင်းချင်းပြောတဲ့စကား ..ကျွန်မတို့ လူငယ်တွေ နားထဲ .. ထော်လော်ကန့်လန့်နဲ့ဖြစ်သလို …ကျွန်မတို့လူငယ်တွေပြောတဲ့ တစ်ချို့စကားတွေ လူကြီးတွေ နားမလည်ကြပါဘူး … ။
သေသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ အဘွား(အဖွားရဲ့အမေ ဂျန်နရေးရှင်း သုံးဆက်ခြားသွားပြီ ) မသေခင်က ခဏခဏထောပနာပြုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ် … ဒီကောင်မလေး သိပ်နားကောက်တာပဲတဲ့ လေ …ကလေးဘ၀ကတော့ အဲ့ဒီစကားကြားတိုင်း မှန်ထဲပြေးပြီး ကိုယ့်နားရွက်ဘယ်လို ပုံစံဖြစ်ပေါလိမ့်လို့ သွားကြည့်ရတာ အမောပါပဲ … ။ အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့မှ … ဒါငါ့ကို ပြောရဆိုရကြပ်တယ် ၊ လက်ပေါက်ကပ်တယ်၊ ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် ဂွစွာလို့ ပြောပါလားဆိုတာ သိသွားတော့တယ် … ။ အခုတော့..စကားရည်လုပြောစရာ အဘွားလည်း မရှိတော့ဘူးလေ … ။
နောက်ပြီး လူကြီးတွေပြောတဲ့.. ခေါင်းညှပ်သွားမလို့ ဆိုတဲ့စကားနေရာမှာလည်း … ဆံပင်သွားညှပ်မလို့ဆိုတဲ့ စကားက အစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ် …. ။ ရှေးလူကြီးအချင်းချင်း ခေါင်းသွားညှပ်မယ်ဆိုလျှင် နားလည်ပေမယ့် … ကျွန်မတို့ကို … ခေါင်းမညှပ်ဘူးလားလို့ မေးလျှင် … ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်မိပါတယ် .. ညှပ်တာက ဆံပင် ဘာကြောင့်များ ခေါင်းဖြစ်ပါလိမ့်လဲပေါ့နော် … ။ လူကြီးတွေကတော့ ..သူ့အခေါ်ဝေါ်နဲ့ သူ ဟုတ်နေတာပါပဲ … ။ ဆံပင်မွှေးကိုလည်း .. ခေါင်းမွှေးလို့ ခေါ်လို့ …. အူတက်အောင် ရယ်မိခဲ့ပါသေးတယ် … ။
နှုတ်မှထွက်သော စကားတစ်ခွန်းဧ။် အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် မိမိဧ။် စိတ်တွင်ရော .. သူတပါးစိတ်တွင်ပါ … ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုးများစွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့် … အသံကြောင့် ဖားသေရခြင်းလိုအဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရအောင် …. နှုတ်စောင့်စည်းရမယ်ဆိုတဲ့ အသိ ဖြစ်ပေါ်လာမိပါတော့တယ် …. ။
အီးတုံး က ရင်ခုန်သွားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အေကေကေအို ရေ သတိတော့ထား….ဟားးးဟားးးး
ဟီးဟီး .. ဦးလေးရေ .. တမျိုးမထင်ပါနဲ့ …. ။ ဟိုလို ဒီလို ရင်ခုန်တာမဟုတ်ပါဘူး .. လေတိုက်တာတောင် ရယ်တတ်တဲ့ စိတ်ကစားတဲ့ အရွယ်မှ မဟုတ်ပဲ .. ဟီး … ။ တစ်ခါတစ်လေ အလကားနေရင်း လာလာငြိချင်တဲ့ လူတွေရှိလို့ .. မနက်စောစော လေစစ်ဆင်ရေး နွှဲရတော့မှတ်လို့ .. ရင်ခုန်သွားတာ … ။ ထစ်ခနဲဆို စိတ်လည်း မတိုချင်တော့ဘူးလေ .. ဟဲဟဲ …
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ဟီးဟီး .. အမိုက်မဲလေးမို့ ခွင့်လွှတ်ပါ ..
ငိုပြီးတော့ မပြန်လောက်ပါဘူး .. .အလှူရှင်က ခန့်ချောကြီး သဘောလည်းကောင်းပုံရတယ် … (မြှောက်တာမဟုတ်ဘူး တကယ်တကယ် …. သုံးမိနစ်လောက်စကားပြောတာနဲ့ ခင်ဖို့ကောင်းမှန်း သိသာတယ် .. )
ဖင်းသက်ပြားရေ .. မီနောက်ရပါဘူး … ။ ရွာထဲကဖားကို မေ့ပြီး ဥပမာထည့်ရေးမိလိုက်တာပါ ဟဲဟဲ … ကျွန်မပြောတဲ့ ဖားက စာမရေးတတ်တဲ့ ဖားပါ .. ဟီးဟီး
အစ်မနွယ်ပင်ပြောတာ မှန်တယ် .. ဟီး … ။ စိတ်ကတော့ ရိုးမှရိုး(ယုန်<<< တောထဲမှာ .. ဟီး) .. ပါးစပ်ကလည်းပြောတတ်လွန်းလို့ …. သူများရိုက်ပေါက်ချည်းပဲ …
မိုးဇက်ရေ .. ဟဲဟဲ … မူလအလှူငွေထက်မလျှော့ပါဘူး … စာအိတ်လေး လက်ထဲရောက်တဲ့ အချိန်နဲ့ … ပြောတဲ့ အချိန် .. ကွက်တိကျသွားလို့ပါ ..ဟဲဟဲ … (နောက်တာပါ … )
အလှူရှင်က နာမည်ကို ပရိုက်ဗိတ်စီထားပေးပါလို့ပြောတာကြောင့် … လတ်တလော အလှူငွေ ကောက်ခံမှု အခြေနေ စာပို့တဲ့အခါ … နာမည်မရေးပေးထားပါဘူး … ဟီးဟီး … ။
အဲဒီနေ့က ကားပေါ်မှာလူကြီးတစ်ယောက် ငိုယိုသွားတာတွေ့ရင် အီတုံးဆီက ပြန်သွားတာပဲ..
နားကောက်တယ် ကျနော်လည်း ကြားဖူးတယ်ခည …..
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ဗမာတွေသုံးတာများလား မဆိုနိုင်ဘူးရယ်…
ဇဂါးမစပ် ..ဖားက ဘာလို့ သေရမတုန်းဗျာ….
မီနောက်ပါနဲ့ ……ဖားက အသက်ပြင်းဘာဒယ်…
ဒါကတော့ တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တက်ပါတယ် etone ရေ
ကိုယ့်စိတ်ထဲတော့ သဘောရိုးနဲ့ ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပင်မယ့်
တစ်ဖက်လူအဖို့တော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတက်တယ်လေ .
အခုလည်း ပိုစ့်တင်ပြီး တောင်းပန်ထားတာပဲဟာ လာလှူသွားတဲ့ အလှူရှင်က
နားလည်မှာပါ ဒါနဲ့ စကားအပြောမတက်တဲ့သူတွေက စိတ်ထားရိုးတယ်ဆိုလားပဲနော် ….
အဲဒါနဲ့အလှူငွေကို မူလရည်ရွယ်ထားတာထက်တော့ လျော့မလှူသွားပါဘူးနော်
ဟုတ်တယ်မအိတုန်ရေ မရည်ရွယ်ပဲပြောလိုက်တဲ့စကားက တစ်ဖက်လူကိုထိခိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ
သဂျီးကို ၂ဖူးပြောင်တယ်လို့ ပြောတော့ဘူး..ငိုတွားမှာဆိုးလို့ 
သဂျီးတူမ မရတော့မှာစိုးလို့ မဟုတ်ဘူးလား
ဆရာထက်ဆိုလို့ အဘိုးကြီးမှတ်တယ် ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော်လူငယ်လေးပဲတဲ့
အခုဟာက တော့ အော် ဆရာထက်ဆိုလို့ ဒီလောက်နာမည်ကြီးတာ
သေချာကြည့်တော့မှ အသားမည်းမည်းနဲ့ ကုလားကြီး ကျနေတာပဲတဲ့
အဲ့ဒါ အင်းစိန်က အပျိုကြီး ခင်တုတ်တဲ့ အင်း … ရင်ရှုပ်သွားတယ်။
ဟီးဟီး … ကိုထက်ဝေးနေရာမှာဆို .. အတော်ကြီး နင်သွားမှာပဲနော် … ။ အောင့်သီး အောင့်သက်ကြီး ဆေးကုပေးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် .. ဟီးဟီး
အရင် ရည်းစား ပြောဖူးတာကတော့ ၊ ချောတဲ့ကောင်လေးတွေ တွေ့ ရင် ၊ ရင်မခုန်ပေမယ့် ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလားဘဲ ။
ကြားဖူးနားဝ များ ပြောပြပါတယ် ။ ဟီဟိ
ကလေးတွေက “ဘဘ” လို့ ခေါ်တာခံရဘို့
အဲဒါနဲ့ပဲ အိမ်အောက်ထပ်က ဘဘခေါ်တဲ့ ကလေးမလေးကို
တနေ့တနေ့ ကြွေးရှင်ရှောင်သလို လှည့်ပတ်ရှောင်နေရတာ…။
အဲဒီ ခန့်ချော နောင်တော်ကိုပြောလိုက်ပါလား
မအိတုန်ရေ့……….အသက် လေးဆယ်မှ ဘ၀စတာပါလို့ …..ဟိဟိ..
အသက် လေးဆယ် ဆိုတာ “ဟာ” မနဲ နေရလောက်အောင် မကြီးသေးပါဘူး အေ။
ကြည့်ရတာ ၅၀ကျော် ၆၀နီးပါး များလားမှ မသိတာ။ ;-) jk
ကိုပေရေ …ချောတဲ့ကောင်လေးတွေကိုတော့ … လိုက်မကြည့်မိပါဘူး … ကြည့်ချင်းကြည့် .. သူတို့ကသာ လိုက်ကြည့်ပါစေပေါ့ .. အဟဲ .. (နောက်တာ ) တစ်ခါကကားပေါ်မှာ အသံတစ်သံထွက်လာတယ် .. အတော်ကြည်လင်ပြတ်သားလို့ မျက်နှာရော ဘယ်လိုများပါလိမ့်လို့ ကြည့်လိုက်တာ … ကမ္ပဌာန်းရုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ် .. ဟီး ဟီး ……နှစ်ရက်သုံးရက် အဲ့ဒီမျက်ခွက်ပြန်မြင်နေမိတယ် ….. နောက်ပိုင်းသိပ်မစပ်စုတော့ဘူး …
ဦးဦးပါလေရာရေ .. ဘဘခေါ်တဲ့ကလေးမကို ကျွေးဖို့ .. မုန့်ပဲသရေစာ အသင့်ဆောင်ထား… ။ လမ်းမှာတွေ့လျှင် … ပေးလိုက် … ပြီးလျှင် .. ဦးပေးတာနော် .. ဘယ်သူပေးတာလဲ .. ဦးပေးတာနော် ဆိုပြီး .. အတိုင်ဖောက်ညီညီ ငါးခေါက်လောက်ရွက်လိုက် .. နောက်တစ်ခါဆို.. မုန့်မျက်နှာနဲ့ …. ဘဘကနေ ..ဦးဖြစ်သွားနိုင်ပါကြောင်း ……. အချွန်နဲ့ မလိုက်ပါတယ် ( မုန့်ဖိုးကုန်အောင် )
ကိုကမ်းကြီးရေ …ရယ်တော့ရယ်ရတယ် … ကျွန်မကသာ လေးဆယ်လို့ အခုမှန်းနေတာ … သူ့အသက်လေးဆယ်တောင် ပြည့်ပြီးရဲ့လားမသိဘူး .. မဟုတ်လျှင် … နှစ်ခါ ထပ်အားနာရတော့မယ် … ။
အရီးလတ်ရေ … … ဟာခနဲဖြစ်သွားရတာက … ကျွန်မစိတ်ထဲ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအရွယ်ပဲ ထင်ထားပြီး တွေ့လိုက်မှ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အရွယ်မို့လို့ပါပဲ … ။ ငါးဆယ်ကျော် ခြောက်ဆယ်တန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး .. ဟီးဟီး …
etone ဟာ အပျိုကြီးလား ကိုယ့် မှားတတ် တဲ့အမှား ကို မဖြစ်အောင် စကားကို လွှတ်ကနဲမပြာဘဲ စိတ် ထဲမှာ
အရင်ပြောကြည့်စေချင်ပါတယ် အေးလေ ခန့်ချောကြီး ဖြစ်လို့ ရင်ခုံနေတော့ ဆင်ခြင်မှုလေး နဲသွာတာမျိုး
kokothandarရေ .. အပျိုဂျီးမဟုတ်သေးပါဘူး .. အပျိုလေးပါချင့် (အိုဗာသာတီးဖြစ်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးဒယ် )
သစ်ရွက်လှုပ်တာတောင်ရယ်တတ်တဲ့ အရွယ် ၊ စိတ်ကစားတတ်တဲ့ အရွယ်မဟုတ်လို့ ..မိန်းမနှူးဘာတွေလို …. တွေ့သမျှ လူပျို၊လူပြို ၊ လူချောတိုင်း ရင်မခုန်တတ်ပါဘူး … ။
အချစ်တွေ ၊ အနှစ်တွေ ၊ အမြစ်တွေလည်း စိတ်မ၀င်စားပါဘူး … သဘောထားကြီး၊နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ချင်ခင်တွယ်တာအလေးထားပေးတဲ့လူ တစ်ယောက်လုံးရှိနေတာပဲ …ကျွန်မအတွက် လုံလောက်ပြီ ။ …… ကျန်တဲ့ ယောကျာ်းတွေအပေါ် မရိုးသားတဲ့စိတ် … မြုမှုန်တစ်ခုစာတောင် မဖြစ်ဖူးဘူး
ကျွန်မရင်ခုန်တာ .. မတွေ့ဖူးမမြင်ဖူးတဲ့ …စာရေးဖော်စာရေးဖက် တစိမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်… ကိုယ့်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အလှူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ပီတိကြောင့်ပဲ … ။ သိပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမတွေးပါနဲ့ …. သဘောရိုးတိုင်း ၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တိုင်းပဲတွေးပါ .. အရာရာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
တောင်းပန်မနေပါနဲ့ကွယ်၊ နောက်တခါဆို အသေသာ သတ်လိုက်ပါ….။
တောင်းမပန်လျှင် စကောပန်ရမလားဟင် …
အင်း မအီတုံ ဆီလာတွေ့ချင်နေတာ သိပ်တောင်မလာရဲသေးဘူးဖြစ်သွားတယ် သွားလှူဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်ဆိုပြီး အေးဆေးနေနေသေးတာ လာရင် ဘယ်လိုများ ပြောမလဲမသိဘူးနော်
လာသာ လာပါ ..ဟီးဟီး .. ဒီတခါ ပါးစပ်ကို ပလာစကာနဲ့ ကပ်ထားပါ့မယ် ..
ကျနော် ကတော့ အဲလိုအပြောခံရတာ ခဏ ခဏပါဘဲ။
ပထမဆုံး အပြောခံရတော့ စိတ်လေသွားတယ်။
ဒီလောက် ၀ မယ်မထင်ဘူးဆိုတဲ့သူတောင်ပါသေးသဗျာ။
ဟီး ….လေးပေါက် အနော်အဲ့လို တခါမှ မပြောဖူးဘူးနော်
တုန်ရေ ဒါမျိုးလေးတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမလည်း ကြုံဖူးတယ် ။
အဟီးလေးပေါက် …. ပြောတဲ့လူက ပါးစပ်က လွတ်ပြီးပြောထွက်သွားတာ … ပြောခံရတဲ့လူကတော့ တင်းမှာပဲနော် .. အဟီး … အောင့်သီးအောင့်သက်နဲ့နော် …ဟီးဟီး … ။
အစ်မပုခ်ျရေ … တစ်သက်နဲ့ တကိုယ် တစ်ခါပဲ ကြုံဖူးပါတယ်.. အားနာစရာဖြစ်သွားတယ် … ။